Qalabka 'Cryptocurrencies' TeraNews.net |
Saadaasha Bitcoin ee 2022 - waxay ku kori doontaa qiimaha
Oligarchs Ruushku waxay ka takhalusayaan tartamayaasha
Shiba Inu iyo Dogecoin - Saadaasha 2022
Kor u kaca calaamada SHIBA INU waxay dhalisay buunbuunin cusub, la kulan Shar Pei
Waxaa laga yaabaa in isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada ee haysta lacagta fiat aysan u baahnayn welwel. Iyo calaamadda cusub ee Shar Pei waxay noqon doontaa mid ka mid ah…
Twitterka waxaa ka maqan aasaasihii Jack Dorsey
Noofambar 29, 2021, talefishanka Mareykanka ee CNBC ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilayo aasaasihii Jack Dorsey oo ahaa maamulaha Twitter-ka.
Kama iibsan kartid kaararka fiidiyowga ee jaban Shiinaha
Ka dib markii la mamnuucay macdanta 'cryptocurrency' ee Shiinaha, suuqa kaararka fiidiyowga ciyaarta wuxuu muujiyay hoos u dhac aan horay loo arag oo ku yimid qiimaha. Dhamaan ganacsiga ...
Barnaamijka antivirus ee Windows 10 wuxuu lumiyay ku xirnaantiisa dhowr sano ka hor. Macno ayey leedahay in la iibsado softiweer haddii ...
Macdanta Chia waxay waxyeelo u geysataa saxannada - ganaaxyada ugu horreeya
Cryptocurrency Chia waxay durbaba ku guuleysatay inay necbaato oo kaliya soo saarayaasha aaladaha keydinta macluumaadka, laakiin sidoo kale kuwa bixiya ilaha internetka ...
Way fududahay inaad iibsato macdan qodayaasha ASIC qaab kuleeliyaha SATO
Shirkadda WiseMining waxay la timid hindise xiiso leh oo ku saabsan suuqa. Nooca ganacsi wuxuu ku deeqayaa inuu ku iibsado macdanta ASIC qaab kuleyliyaha ...
Awoodda NVIDIA GeForce RTX 3060 - 50 MH / s
Guusha ay gaareen macdan qodayaasha Shiinaha marka la eego jebinta ilaalinta kaarka fiidiyowga ee NVIDIA GeForce RTX 3060 waxaa si firfircoon looga hadlayaa shabakadaha bulshada.
Heerka Bitcoin ee sanadka 2021: saadaasha $ 250
Qofku wuu ku qosli karaa oo ku dhaafi karaa wararka xiisaha leh haddii hadalada noocaas ah ay ka yimaadaan ganacsatada. Sida…
Maxaa loo baahan yahay Bitcoin iyo waa maxay rajada laga qabo dahabka cusub ee dhijitaalka ah
Billowga Bitcoin Sannadkii 2009, Bitcoin ayaa loo soo bandhigay adduunka, laakiin adduunku si gaar ah ugama faraxsanayn ikhtiraacidda. Bilowga safarkiisa, Qiimaha Bitcoin ...
Bitcoin vs dahab: waxa la maalgashado
Ganacsade Mareykan ah, madaxa Kooxda Lacagta Dijital ah, Barry Silbert, ayaa fiidiyoow ka bilaabay shabakadda, isagoo ku boorinaya maalgashadayaasha ...
Saadaasha Bitcoin illaa dhamaadka sanadka
Mawduuc madadaalo u ah dejinta ganacsi kuu gaar ah, tan bitcoin. Xaqiiqdii, haysashada raasumaal bilow, waqti firaaqo iyo ...
Waa maxay bitcoin maxaase loogu baahan yahay
Dhibaatooyinka xagga qeexitaanka iyo daah-furnaan la'aanta nidaamka maaliyadeed ayaa horseeday abuurista sheekooyin khiyaali ah oo ku saabsan lacagta dhijitaalka ah ...
AMD: cusbooneysiinta darawalka macdanta
Cusboonaysiinta muddada dheer laga sugayay ee AMD waxay ka farxisay macdan qodayaasha isticmaala kaararka fiidiyowga ee Radeon si ay uga soo saaraan cryptocurrency. Aynu xusuusino taas ...
Isweydaarsiga Lacagta 'cryptosesrency'
Waxay qaadatay dhowr bilood adeegga cusub inuu cagahiisa ku istaago si uu isu muujiyo isla markaana u qaado safafka ugu horreeya ee tirada ...
NiceHash waxay magdhowdaa lacagtii la xaday
Waxay umuuqataa in adeega macdanta ee NiceHash ay ilaalin doonto balanqaadyadeeda isla markaana ay u soo celin doonto batoonada la xaday milkiilayaasha jeebka. Heerka, on ...